बुधवार पनि १.६० % घट्यो नेप्से, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको सबैभन्दा बढी कारोबार
फागुन १९, काठमाडौं । बुधवार पनि नेप्से परिसूचक १ दशमलव ६० प्रतिशत घटेको छ ।
यो दिन अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३९ दशमलव २३ अंकले घटेर नेप्से परिसूचक २ हजार ४१६ विन्दुमा झरेको हो । यस दिन २ हजार ४४९ दशमलव २३ विन्दुदेखि खुलेको बजार २ हजार ४५३ दशमलव ३७ विन्दुसम्म पुगेको थियो ।
मंगलवारको तुलनामा बुधवार निरन्तर बजार घटेर बन्द भएको हो । मंगलवार २ हजार ४५५ दशमलव ३३ विन्दुमा नेप्से परिसूचक बन्द भएको थियो । यो दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १ दशमलव ६० प्रतिशतलेनै घटेको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स ७ दशमलव १२ अंकले घटेर ४३६ दशमलव ८० विन्दुमा झरेको हो ।
अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक घटेपनि कारोबार रकम भने बढेको छ । मंगलवार रू. ६ अर्ब ११ करोड ९६ लाख ३८ हजार बराबरको १ करोड ३१ लाख ६ हजार ७३८ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
बुधवार भने रू. ६ अर्ब २५ करोड ४८ लाख ९ हजार बराबरको १ करोड १३ लाख ९२ हजार १३५ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । यो कारोबार २१२ ओटा कम्पनीको ६३ हजार ६७४ पटकको व्यापारमा भएको हो ।
यसदिन सबैभन्दा बढी नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको रू. २९ करोड ९७ लाख ६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । कम्पनीले बुधवारनै गत वर्षको लागि प्रतिशेयर रू. ४० का दरले नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो ।
बजार दोहोरो अंकले घटेको दिन कम्पनीको शेयरमूल्य पनि ५ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. ७३ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार १९९ कायम भएको छ ।बुधवारको बजारबाट व्यापारिक र होटल्स तथा पर्यटन समूहले सबैभन्दा बढी कमाएका छन् । कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहगत परिसूचकमध्य यस दिन व्यापारिक समूहको सर्वाधिक ९ दशमलव २६ प्रतिशत र होटल्स तथा पर्यटन समूहको १ दशमलव ६५ प्रतिशतले परिसूचक बढेको छ भने बाँकी समूहको घटेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयरमूल्य यो दिन १० प्रतिशतले बढेको छ भने हिमालयन पावर पार्टनरको शेयरमूल्य ८ दशमलव १६ प्रतिशत बढेको छ । साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेशनको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ९२९ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १० हजार २२२, चन्द्रागिरी हिल्सको प्रतिकित्ता रू. ५० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ५५० र हिमालयन पावर पार्टनरको प्रतिकित्ता रू. ३२ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४२४ पुगेको हो ।
यसदिन एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स र बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य ६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सको ६ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. ८१ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार १९३ र बरुण हाइड्रोपावरको ६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. १४ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. २१७ कायम भएको छ ।